Amazon Kushambadzira Optimization Nongedzo
Amazon iri ichienderera mberi ichikura uye kuva chinhu chakakosha muhupenyu hwevanhu. Unogona kuwana zvakanyanya chero chaunoshuvira kutenga kuAmazon uye nekufamba kwenguva unogona kutenga kuAmazon mune dzimwe nzvimbo dzepasi.
Haisi chakavanzika chekuti kushambadzira kwedhijitari kwakachinja zvachose maitiro atinoona kushambadzira. Zvinopera pasina kutaura kuti kana iwe uchida kushambadza chimwe chinhu, iwe unofanirwa kuve nevezvenhau midhiya kuwedzerwa kune yako yekushambadzira musanganiswa. Nekudaro, kana zvasvika pakushambadzira kugona, Amazon ndiyo chete chikuva apo vanhu vari kunyatso kuratidza nema wallet avo mumaoko avo vachitsvaga kushandisa mari pane chimwe chinhu. Izvi hazviwanzo kuitika chero kumwe kunhu.
Izvi ndizvo chaizvo chikonzero kunzwisisa kuti kushambadza paAmazon kunoshanda sei hunyanzvi hwakakosha hunogona kubhadhara zvakanyanya kana zvasvika pakurima zita rezvigadzirwa. Kana iwe uchida kudzidza kutanga bhizinesi kuAmazon, haugone kuzviita usina kudzidza nezvekuti kushambadzira kweAmazon kunoshanda sei.
Mashandisiro eAmazon anoshanda
Pamusoro zvinoratidzika sezviri nyore. Vatengi vanouya kuAmazon uye vanotsvaga chimwe chinhu chavanoshuvira kutenga. Ivo vanoita izvi nekutaipa chirevo muAmazon yekutsvaga bar inotsanangura izvo zvavari kutsvaga. Kana ivo vachitsvaga, ivo vanogashira mapeji uye mapeji emhedzisiro anoenderana nezvavanotsvaga izwi.Mimwe yemhedzisiro iyi inotsigirwa kushambadzira kune zvigadzirwa zvinyorwa. Zvishambadziro zvinotsigirwa zvinotaridzika senge zvavaizoita kana iwe ukazviwana zvine muviri, nebheji diki "rakatsigirwa" kumusoro:
Izvo zvinotara kuti kukwirira pakutsvaga kushambadzirwa kwako kushambadziro ndiko kukwirira kwakaita bhidhi yawakaisa pane iyo chaiyo yekutsvaga izwi / kiyi. Iyi inonzi Pay Pay Click system, ndosaka vanhu vachifona Amazon kushambadzira Amazon PPC. Iyi ndiyo inonyanya kukosha kushambadza paAmazon, uye zvine nharo ndiyo inoshanda kwazvo. Chinangwa chako uchishambadza paAmazon hachisi chekungotsvaga nzira yekuratidzira mune yevatengi yekutsvaga mitsva kuti uwane kutengesa Ehezve, kutengesa ndiyo poindi yekutengesa kuAmazon. Nekudaro, kune zvekare zvakare kwenguva yakareba mabhenefiti ekuratidzira pane chero chero nguva yekutsvaga nguva dzose.
Sezvo iwe uchinge uchiona iwo maratidziro ayo anoratidza kumusoro kubva chero kwekutsvaga haana kusvika ipapo nekutadza. Iwe unosimudzira kumusoro mukutsvaga nekushambadzira pane iwo ekutsvaga mazwi, uye nekuwedzera kutengesa kwaunoita, iko kwakanyanya mukutsvaga iwe waunogadzira muviri. Kutengesa kuAmazon ndezve nezve chivakwa chaunogona kuchengetedza papuratifomu pane ako zvinyorwa. Kushandisa kushambadzira ndiyo nzira yaunogona kukudziridza iyo.
Tsvagurudzo uye kumisikidza zvinangwa zvako zvechimiro chitsva cheAmazon PPC
Kana zvasvika pakuseta yako yekutanga Amazon PPC chimiro, chinangwa chako chekutanga kutsvaga zvinangwa zvinokwanisika zvemushambadziro wako wekushambadzira uyo uchave nemukana wekushandura kuita zvekutengesa uye wozoshanduka kuita organic chinzvimbo chinzvimbo mukutsvaga kwenguva. Iwe zvakare unoda kuve unodhura-uchiita uchiita izvi. Izvi zvinoreva kuti haudi kushandisa mari yakawandisa usati waona kuti chii chinoshanda uye chii chisingashande. Kazhinji, iwe unofanirwa kutevedzera nhanho idzi:
1) Ita kiyi yekutsvaga kwekutanga
Usati waita chero chinhu muAmazon mutengesi wepakati interface, iwe unozofanirwa kuzviwanira iwe pachako runyorwa rwemazwi ekutsvaga ekushandisa mumakampeni ako. Iwe unogona kuita izvi intuitively kana iwe unogona kushandisa software. Uchishandisa software inokupa iwe neruzivo rwakawanda iwe rwausingakwanise kuunganidza neimwe nzira.
Nzvimbo yakanakira yekutanga ndeyekutsvaga mazwi akakosha kuti zvimwe zvigadzirwa zvakafanana nezvako zvinomisikidzwa pane zvakagadzirwa kare. Chishandiso chikuru cheichi ndicho AMZScout Reverse ASIN kutarisa. Iwe unogona kungotora iyo ASIN yechero rondedzero iwe yaunoshuvira kuongorora uye kuiisa mune yekutsvaga bar yeiyo chishandiso uye tsvaga ese eakakosha mazwi ayo chinhu akaiswa pane, pamwe nemwedzi nemwedzi mavhoriyamu ekutsvaga. Ngatiti uri kutengesa bhegi. Iwe unongotora iyo ASIN kubva kune yakasimbiswa bhegi rondedzero uye uwane ako mazwi akakosha:
Iwe unogona kuita izvi kakawanda uye uwane mazwi akakosha kubva kune akawanda mabhegi zvinyorwa.
2) Kanda mambure akafara
Iwe unoda kuronga ako mishandirapamwe nenzira yekuti unorova akawanda zvibodzwa sezvinobvira. Izvi zvinokubatsira iwe kuti uwane izvo zvinoshanda iwe zvaunogona kukwikwidza kune zvine hukasha mune ramangwana. Iwe unofanirwa kushandisa dzese sarudzo dzauinadzo kwauri kuti uwane nhamba yepamusoro yekutengesa uye organic chinzvimbo ichienderera kumberi.
3) Ziva zvakanaka zvinangwa
Sezvo iwe paunotanga kumhanyisa mishandirapamwe yako, iwe unofanirwa kunge uchinyatso tarisa pane izvo zvauri kushandisa yako mari pane uye chii chiri kunyatso kukonzera kutengesa. Iwe unoda kuita izvi nemazvo sezvo iwe usingakwanise kutambisa nguva. Kana paine chiri kushanda, wedzera bhidha. Kana paine chiri kukundikana, chidzikise, kana kana chiri kukundikana zvakanyanya, bvisa chinangwa zvachose.
Iye zvino zvaunenge uine ruzivo rwekutanga rwekuti zvinangwa zvako zvekutanga ndezvipi, ngatitangei pane zvaunokwanisa kuzadzisa.
Mhando dzakasiyana dzeAmazon Campaigns
Kune maviri makuru mhando dzeAmazon makwikwi anoenderana nemaitiro anowanikwa: Manual Campaign uye Yega otomatiki mushandirapamwe Iwe unogona zvakare kurongedza mhando dzako dzemishandirapamwe dzinoenderana nekutarisa, kwaunomhanyisa zvigadzirwa zvekunangisa mushandirapamwe uye musimboti wekutarisa mushandirapamwe. Isu tatoona kuti rakakosha sei rinotarisa kushambadza rinotaridzika. Chigadzirwa chakanangisa kushambadza chinonyatso kuratidza pasi pechipi zvacho chakanyorwa, zvakanyanya seizvi:
Iyo yekunangisa yeAmazon system inoshanda nekushandisa anokwikwidza ASINs sekuvavarira uye kubhidha pane izvo. Iyo inoenderana sisitimu iripo padhuze nekiyi kiyi yekunangisa. Heano zvimwe zvakasarudzika:
Otomatiki anotarisa macampaign
Otomatiki ekumisikidza macampaign akawandisa maoko kubva. Amazon ichaita kunongedzera kwauri zvichibva pamazwi erudzii anogona kuwanikwa muzvinyorwa zvemazita ako eAmazon pamwe nerudzi rwechigadzirwa chauri kutengesa, uye chikamu chauri kutengesa mairi. Iwe une sarudzo dzekutsvenesa auto mushandirapamwe. Iwe une mana akasiyana ekutsvaga nzira dziripo.
Vhara mechi ishoko rekutarisa rakanangana nesarudzo inonongedza mazwi akakosha ayo ane hukama zvakanyanya nechako chigadzirwa.
Mutambo wakasununguka ndeimwe kiyi yekutarisisa sarudzo inosvitsa mazwi akakosha ayo akawandisa uye anogona kunge aine hukama nemamwe marudzi akafanana ezvigadzirwa kana akajairika kune yako niche uye chikamu.
Substitutes chigadzirwa chakanangana nesarudzo inovavarira vakwikwidzi vako vakananga maASIN ari kutengesa iyo chaiyo mhando yechigadzirwa.
Kukwana ndicho chimwe chigadzirwa chakanangana nesarudzo inovavarira zvigadzirwa zvakafanana izvo zvine chekuita nechigadzirwa chako kana chikamu chizere chiri mukati.
Chinyorwa chekunangisa Campaigns
Kusiyana neye auto auto mushandirapamwe, yemanyorero emanyorerwo iwe unofanirwa kupinda mune zvinangwa iwe pachako. Kune maviri marudzi emishandirapamwe sezvatakurukura. Iko kune Keyword zvibodzwa zvinokupa iwe matatu emhando mhando dzemako keyword zvinangwa:
chaizvoizvo - Paunonangisa kiyi ine chaiyo matchtype, iwe unozoratidza mukutsvaga chete kana mumwe munhu achinyora mune iro rakakosha izwi kana huwandu hwaro. Semuenzaniso dai iwe waizopinda iro kiyi kiyi Chikoro Chakadzoka iwe waizouya mukutsvaga kwe:
Chikoro Bhegi uye Chikoro Mabhegi
Mutsara - Mutsara matchtype unoshanda uchishandisa iro kiyi iwe yawakapa uye nekukuisa iwe mune chero kutsvaga uko kune yakanangwa kiyi kiyi uko mazwi ari muhurongwa hwakafanana. Uchishandisa iyo muenzaniso kubva pakutanga, heino mimwe mitsva yekutsvaga iwe yaunogona kuratidza mukati:
Blue Chikoro Mukwende
Chikoro Bhegi rine tambo
Rakafara - Iyi ndiyo isinganetsi matchtype uye icharatidza chigadzirwa chako mune chero kutsva kune iro rine kiyi iwe yawakanangisa. Zvekare zvakare, uchishandisa iwo iwo iwo muenzaniso, iwe waizoratidza kumusoro mune anotevera kutsvaga:
Diki Bhegi YeChikoro
Vasikana Chikoro Pink Bhegi
Kana zvasvika pamanyorerwo echigadzirwa echinangwa chekuita iwe une mbiri sarudzo.
ASIN yakanangisa mishandirapamwe - Kwamunonanga kune akakwikwidza kudhindwa.
Chikamu chakanangana - Kwamunogona kunongedza chikamu chese kana chikamu. Iyi sarudzo inokutendera iwe kunatsiridza yako yekutarisa uchishandisa akasiyana maitiro senge ratings yezvigadzirwa zvauri kushambadzira, yavo mhando uye mutengo renji:
Kune mamwezve akati wandei mhando yemishandirapamwe inongowanikwa chete kune zvigadzirwa izvo zviri chikamu cheAmazon Brand registry. Iyi mishandirapamwe inoshanda ichishandisa michina imwechete iine sarudzo dzakatosiyana, sekutungamira mutengi kumberi kwechitoro chechiratidzo kwete kune chakatarwa chigadzirwa, pamwe nezvimwe zvingasarudzika senge masirogani uye kushambadzira kwevhidhiyo:
Maitiro ekugadzirisa ako maAmazon ads
Iye zvino zvawava nekunzwisisa kwesarudzo dzakasiyana dzakasiyana dziripo, ngatiendei kune mamwe matipi ekuti unganyatsogadzirisa sei makwikwi acho:
Boka mishandirapamwe yako nekukosha - Iwe unogona kupatsanura zvese zviri zviviri izwi rako rekodhi uye zvigadzirwa zvibodzwa mumapoka zvichienderana nekukosha. Iwo mazwi akakosha anotsanangura zvakananga chigadzirwa chako ndiwo ako akakosha mazwi akakosha uye tarisiro. Chigadzirwa ASINs chinangwa chakanyanyisa kushanda asi zvichiri kukosha. Ose maviri aya marudzi ezvinangwa anofanirwa kushanda. Kana iwe usingakwanise kushandura kutengesa kubva kune vatengi vari kutsvaga chimwe chinhu chinonyatsotsanangura chigadzirwa chako kana iri inofananidzwa uye yakaipa imwe nzira unogona kunge usina chigadzirwa chakakodzera kuenderera uchitengesa. Ichi ndicho chinhu chekutanga chaunoda kugadzirisa. Rimwe boka rakanangana nezvinangwa zvinogona kushanda kana kushanda zvakaringana. Izvo zvinogona kuve zvinangwa zvinogona kushandiswa kutsanangura chigadzirwa chako zvakajairika mazwi kana ASIN yezvinhu izvo zvinogona kuve zvinowirirana kune icho chigadzirwa chauri kupa. Izvi ndizvo zvibodzwa zvakakosha kuyedzwa sezvo vaine mukana unonzwisisika wekushandura. Aya mapoka maviri akakodzera anofanirwa kurapwa zvakasiyana uye kunyanya mumatanho akapatsanurwa. Chinangwa chakakosha chinofanirwa kuve nemabhidi akakwira uye anofanirwa kuteedzerwa zvine hukasha uye haafanire kukurumidza kubviswa pamushandirapamwe. Kune rimwe divi iwe unoda kubhidha zviyero zvidiki pane zvisina kukodzera zvinangwa sezvo iwe uchingofarira mashandiro avanoita nechako chigadzirwa.
Kutanga nemabhizimusi anochengetedza - Ehe, iwe haudi kupaza bhangi uchingoedza kutsvaga izvo zvinoshanda nezvisingashande. Pakutanga iwe unenge uchishandisa mari yakawanda pakutora data pane pakutora zvekutengesa. Nezvo zviri izvo mamiriro, iwe unofanirwa kuve unongwarira nezve mashandisiro aunoita mari yako, kunyanya uchifunga chokwadi chekuti iwe unogona kuwana mazana kana asiri zviuru zvemazwi akakosha auchazoda kuyedza. Mabhidha ako pane akakodzera zvibodzwa anofanirwa kuve akati kwirei. Nekudaro, iwe unofanirwa kungova nenhamba shoma yeaya akakosha zvinangwa. Nemamwe ese emabhidi ako, chenjera kwazvo nekushandisa kwako mari.
Kunyora mifananidzo uye chigadzirwa kupikisa - Izvo zvinopera pasina kutaura kuti hapana chimwe cheichi chiitiko chinoshanda kana mutengi akasatenga chigadzirwa chako kana vasvika pakurongwa kwako. Chigadzirwa mifananidzo inoita basa rakakosha mukutendeuka kwako. Ikopi yakanyorwa yakanyorwa zvakanaka inoenda kure. Nekudaro, mifananidzo ndiyo inonyanya kukanganisa chikamu chako. Ichi chikonzero nei zvichikosha kuwana yakachena uye yakasviba chigadzirwa mifananidzo. Unofanira zvakare kutsvaga nzira yekudzidzisa mutengi nezvechigadzirwa chako uchishandisa mifananidzo. Ita shuwa kuti mifananidzo yako iri kuendesa yakakosha maficha echigadzirwa chako.
Yenguva yekuwana kugona kwakanyanya
Iyo Amazon yekushambadzira system iri nyore kwazvo uye nyore kuzivana nayo. Zvisinei, zvakaoma kugona. Kana iwe uine software chaiyo uye zvinangwa zvako zvakatsanangurwa zvakajeka, pamwe nechigadzirwa chakanaka, iwe uri munzira yako yekuisa yako chitoro cheAmazon uye brand. Rangarira ku:
Ita rakakodzera kiyi yekutsvaga.
Kanda mambure akafara.
Bvisa zvakashata kuita zvinangwa, wedzera mabidi pane anoita zvakanaka.
Batanidza zvinangwa zvako nemishandirapamwe zvichikosha.
Kutanga nemabhidha anochengetedza.
Ongorora mhedzisiro pasvondo.
Bvisa uye chengeta mishumo yekushambadzira zvese yekutarisira yako PPC chimiro uye nezveramangwana rezita.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti maneja yako Amazon PPC chiitiko chiri kuenderera uye chinoda kugara uchitariswa. Iko hakuzombove kuchazove nechinangwa chinoita zvinowirirana chero nguva yakapihwa. Maitiro ekutenga anochinja, vakwikwidzi hunhu hunoshanduka, kune zvekare mwaka wekutenga maitiro uye zviitiko. Kana iwe uchimhanyisa ako maAmazon kushambadzira iwe unowedzera kuve hunyanzvi pakuzvigadzirisa nekugadzirisa iwo. Rombo rakanaka vatengesi!
Yekupedzisira Nongedzo yeKushambadzira muna 2021
Pamusoro Pakavanzika Zvivimbiso nezve Keyword Research mu 2017
Yekupedzisira Nongedzo kuAmazon Rondedzero Kugonesa: Insider Strategic
Nzira Yokuita Nayo Keyword Research yeSeO: Gwaro Rokutanga
Maitiro ekukwirisa SEO mazita ane akakurumbira mazwi